अजरबैजानले एक सेकेन्डका लागि पनि युद्धविराम नमानेको अर्मानियाको आरोपः युद्ध देशैभरी फैलने सम्भावना – eKhabarpati
Home/समाचार/अजरबैजानले एक सेकेन्डका लागि पनि युद्धविराम नमानेको अर्मानियाको आरोपः युद्ध देशैभरी फैलने सम्भावना
अजरबैजानले एक सेकेन्डका लागि पनि युद्धविराम नमानेको अर्मानियाको आरोपः युद्ध देशैभरी फैलने सम्भावना
खबरपाटिOctober 15, 2020
अर्मानियाका राष्ट्रपतिले अजरबैजानसँग नार्गोनो–काराबाखमा चलिरहेको झडपमा उनको सेनाको ठूलो क्षती भएको बताएका छन् । टेलिभिजनमा एक सम्बोधनको क्रममा राष्ट्रपति निकोल पाशिन्यानले अर्मानियाको अजेरिसमा क्षती भएको तथापि समान्य नियन्त्रणको स्थिती भएको बताएका छन् ।
पाशिन्यायनले अजरबैजानमाथि युद्धविरामको उल्लंघनको आरोप लगाउँदै भने, ‘अजरबैजानले एक सेकेन्डका लागि पनि युद्धविराम मानेन र त्यहाँ अहिलेसम्म पनि हमला गरिरहेको छ । यसको अर्थ यो भयो कि अजरबैजान पूरा इलाकामाथि कब्जा जमाउनका लागि आफ्नो नीतिलाई अनुसरण गरिरहेको छ ।’
नार्गोनो–काराबाख क्षेत्रमा अजरबैजानका कारण भएको क्षतीबारे पाशिन्यानले भने, ‘मातृभूमिको रक्षामा आफ्नो ज्यान गुमाएका आफ्ना वीरहरु शहिद भएकोमा शोक व्यक्त गर्दछु ।’
उनले भने, ‘यो सम्बोधनको मुख्य उद्देश्य हाम्रो राणनीति र हामी के गरिरहेका छौं त्यसबारे कुरा गर्नु हो र हामी जे गरिरहेका छौं त्यसमा राष्ट्रिय एकतालाई प्रोत्साहित गर्नु हो । ’
उता अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहाम अलिवले अर्मानियामाथि आफ्नो देशको ग्यास पाइप लाइनमाथि हमलाको कोसिस गरेको आरोप लगाउँदै गम्भीर प्रतिक्रियाको चेतावनी दिए ।
युद्ध काराबाखबाट बढेर देशैभरी फैलने सक्नेः
बीबीसी संवाददाता जूरी वेन्डिक भन्छन्, ‘अर्मानियामा एक टार्गेटमा अजरबैजानले मिसाइलमार्फत् जुन हमला गर्यो त्यो नार्गोनो–काराबाखको युद्धमा एउटा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ । अर्मानियाले नार्गोनो–काराबाखभन्दा हमला गरिएको यो पहिलो पटक हो र दुबै देशले यो तथ्य पुष्टि पनि गरेका छन् ।’
अजरबैजानले सीमामा आफ्नो एक शहरलाई निशाना बनाउँदै तैनाथ गरिएको रकेट लञ्चरलाई नष्ट गरेको दाबी गरेको छ । अर्मानियाको रक्षा मन्त्रालयका प्रेस सचिव सुसैन स्टीफेनयानले यसलाई एउटा अनुमान बताउँदै अहिलेसम्म अर्मानियले आफ्नो इलाकाबाट अजरबैजानमा कुनै गोलीबारी नगरेको स्पष्ट पारिन् ।
युद्धको सुरुवात हुँदा अर्मानियाले आफ्नो सीमावर्ती शहर वार्डेनिसमा हमला हमलाको कुरा गरेका थिए र त्यतिबेला टर्कीको फाइटर विमानले अर्मानियाको एक फाइटर विमानलाई खसालेको बताएको थियो । यद्यपि, उसले यसका लागि कुनै प्रमाण दिएका थिएनन् । अर्कोतर्फ अजरबैजानले अर्मानियाले उसको शहरमा आफ्नो सीमाबाट रकेट दागेको दाबी गरेको छ । तर मानिसहरुले अहिलेसम्म यसको प्रमाण देखेका छैनन् ।
अब अर्मानियाका रक्षा मन्त्रालयकी प्रेस सचिव सुसैन स्टीफेनयानले अर्मानिया दुश्मनको इलाकामा सैन्य इलाकामा हमलाको अधिकार राख्ने बताएकी छिन् । अजरबैजानले पनि ठ्याक्कै यस्तै बयान दिएको छ । यदि अब सीमामा झडप जारी रहे यसको अर्थ यो हुनेछ कि युद्ध काराबाखबाट अघि बढेर अर्मानिया र अजरबैजानको पूरा सीममा फैलनेछ ।
यसबाहेक सैद्धान्तिक रुपमा यसले अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ । अर्मानिया रुससँग सीएसटीओ सैन्य गठबन्धको एक सदस्य हो । अर्थात, यसको इलाकामा हमलाको पुष्टि हुँदा रुस आफ्नो सहयोगी पक्षमा यो युद्धमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । यद्यपि, अहिलेसम्म रुस दुबै देशबीच सन्तुलन बनाउने उद्देश्यले मध्यस्थताको भूमिका निभाउने कोसिस गरिरहेको छ ।
१८ औं दिन पनि युद्ध जारीः
नागोर्नो–काराबाखको इलाकाका लागि अजरबैजान र अर्मानियाबीच पछिल्लो दुई हप्तादेखि चल्दै आएको लडाईं अहिलेसम्म रोकिएको छैन ।
रुसको तर्फबाट मध्यस्थताको कोसिस हुँदाहुँदै पनि देश सन् १९९० को दशकदेखि यो क्षेत्रको नियन्त्रणका लागि लडिरहेको छ र हालैको समयमा यो संघर्ष तीब्र भएको छ ।
बुधबार यो लडाईंको १८ औं दिन हो ।
अजरबैजानले नागोर्नो–काराबाखलाई अजरबैजानको हिस्साको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता पाएको बताएको छ ।
यस्तै अर्कोतर्फ अर्मानियाले नागोर्नो–काराबाख ऐतिहासिम रुपमा अर्मेनियाली मानिसहरुको घर भएकोले युगौंदेखि अर्मानियाको हिस्सा भएको बताएको छ ।
नागोर्नो–काराबाख दशकौंदेखि पूर्व सोभियत संघको हिस्सा रहिसकेको अर्मानिया र अजरबैजानबीच तनावको कारण बनेको छ ।
नार्गोन–काराबाखमा भइरहको लडाईंको विषयमा शनिबार अजरबैजान र अर्मानियाबीच रुसको मध्यस्थतामा युद्ध विरामको सम्झौताको घोषणा भएको थियो ।
यद्यपि, यो सम्झौता एक दिन पनि राम्रोसँग टिक्न सकेन ।
मिसाइल स्ट्राइकले फेरिएला भविष्य ?
मंगलबार राती अर्मानियामा अजरबैजानको तर्फबाट दागिएको मिसाइल स्ट्राइकले यो संघर्षलाई नयाँ मोड दिनसक्छ ।
अजरबैजानले गैर मान्यता प्राप्त नार्गोनो–काराबाखभन्दा बाहिर हमला गरेको पहिलो पटक स्विकारेको छ ।
अजरबैजानले आफूले आफ्नो सीमामा तैनाथ एक मिसाइल लञ्चर नष्ट गरेको दाबी गरेको छ । उक्त लञ्चरको टार्गेट अजरबैजानको एउटा शहर भएको बताइएको छ ।
यद्यपि, अर्मानियाको रक्षा मन्त्रालयले यो अस्विकार गरेको छ ।
#अजरबैजानले एक सेकेन्डका लागि पनि युद्धविराम नमानेको अर्मानियाको
घरघरमा ‘अनियन्त्रित’ फैलिएको कोरोना संक्रमण : कहाँ चुक्यो नेपाल ? अब गर्ने के ?
चुलिएको राजनीतिक शक्तिबीच अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग के अपेक्षा गर्ने ?
काठमाण्डाै उपत्यकामा जाेरबिजाेर लागू गर्न सुझाव
हालसम्म वाणिज्य बैंकका ६ हजार कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण
जग्गा कित्ताकाट खुल्यो
केरुङ–काठमाडौं रेल परियोजना : चिनियाँ भूमिमा प्रारम्भिक सर्भे सकियो
भोलिबाट साझाको लामो दुरीका गाडी चल्ने